DAAWO:- MD Farmaajo oo markale shacabka usheegay arin walwal laga qabo in ay dhacdo ”Saacad kuma darsan doono waqtigayga”.
May 16, 2019 Xafiiska Puntland Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 3
Madaxweyne Farmaajo oo qudbad ka jeedinayay munaasabada 15-ka May oo xalay lagu qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arimo xasaasi ah.
Madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday shirkii Garoowe isaga oo sheegay in shirkaasi uu san fashil ku dhamaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka soo horjeeysteen in la sameeyo madal u dhaxeeysa dowlada dhexe iyo maamul goboleeeyada.
“Shirkii garowe ma fashilmin guul ayu kuso dhamaaday marba hadii madaxdii dalka meel isugu tagtay kaliya waxaan diidnay in la sameeyo madal udhaxeysa maamulada iyo dowlada dhexe” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo
Madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday arinta Gal-mudug ayaa sheegay watashi badan kadib uu madaxweyne Xaaf uu ka hor yimid.
Waxa uu dhinaca kale ka hadlay arinta doorashada isagoona ballan qaaday in dowladiisu aysan maalin dheeri ah ku darsan doonin waqtigeeda sidoo kalena ay la dagaalamayso in waqti kororsi ay sameeyaan dowlad goboleedyada.
Madaxwaynaha ma aha in qudbooyinka 15 May in uu ugu sheekeeyo shirka garoowe natiijadiisa.
Markuu shirka fashilmay ayeey ahayd in uu ahaado qofka u horeeyo oo ka hadlo natiijada shirka asagoo la hadlaayo warbaahinta dalka ayagana meeshaas su’aalaha dadka eey qabaan ku weydiiyaan.
Bal fiiriya bal maanta uu shirka natiijadiisa soo hadal qaaday waxaa hortiisa ka hadlay kulli madaxweynayaasha Gobolada oo ummadda Soomaaliyeed dhan wey ka dharagsantahay natiijada shirkaas.
Maxaa keenay in uu madaxweynaha noqdo qofka u dambeeyo oo ka hadlo natiijada shirka Garoowe.
Brotokooka ma yaqaano miyaa.?
Soo ma oga in eey ummadda eey u aragto Madaxweynaha Dalka.
Soo ma oga in eey ummadda asaga warkiisa xiiseyneyso.
Soo ma oga in uu asaga Madaxweynaha Dalka yahay.
Maxuu ka hadalka natiijada shirkaas Goroowe uu ugu dambeeyay.
Ma Fulay miyaa?
Ma Laciif miyaa?
Ma Beenloow miyaa?
Ma isku kalsoona miyaa?
Maxaa dhacay uu warbaahinta u soo hor istaagi kari la’yahay.
Waan ognahay in uu hadal yaqaan aheen oo aftahan ahayn.
Laakiin su’aalo dadka hortooda kama jawaabi karo????
War ma aragteen asagoo warbaahinta soo hor istaagay oo su’aalo la weydiinaay.
Laba sano iyo ka badan ayuu xukunka hayaa hal habeen ayuu hal weriye Villa Soomaaliya ku casuumay uuna yiri su’aalo i weydii. Waana muuqatay su’aalaha la weydiinaayay in uu jawaabtooda horey u soo diyaarsaday haddan weriyahaas warka kuma adkeyneynin. Wey iska caddeed in eey meeshaas Madaxweynaha iyo Weriyaha wax isla wadeen.
Madaxweynahaa shaqsi ahaan wax baa ka si ka ah.
Madaxweyne oo warbaahinta soo hor is taagi karin.
Qudbooyinka xafladaha ayuu meeshaas hadalada uu rabo ka tuur tuuraa asagoo og in meeshaas su’aalo lagu weydiineynin sida hadd xafladdaan 15 May oo kale.
Ummadda Soomaaliyeed weey aragtii dheereed si Hogaamiyaasheeda u arkaan laakiin kan waa middkii ugu horeeyay oo Ummadda ku qaldanto.
Allow Amuuraha Sahal . Aamiin
Magaca aad wadato iyo hadlkaaga is ma raaci karaan waxaan maqli jiray hebel foolxumadii ayuu afxamo ku darsaday bal maxaad noo sheegtay oo macno ah waa uun ana hala iga sheego.